Забур 17 CARS - Nnwom 17 ASCB
1Ao, Awurade tie me tenenee abisadeɛ;
Yɛ aso ma me mpaeɛbɔ
deɛ ɛmfiri nnaadaa anofafa mu.
2Ma me bembuo a ɛfiri wo hɔ.
Ma wʼani nhunu deɛ ɛyɛ pɛ.
3Wopɛɛpɛɛ mʼakoma mu,
na wosɔ me hwɛ deɛ, nanso worenhunu hwee;
masi madwene pi sɛ mʼano renka bɔne.
4Nnipa nneyɛɛ fam no,
wʼanomu asɛm enti
matwe me ho afiri
basabasayɛfoɔ akwan ho.
me nan nnwatiriiɛ.
6Mesu mefrɛ wo, Ao Onyankopɔn
na wobɛgye me so;
yɛ aso ma me na tie me mpaeɛbɔ.
7Da wo dɔ nwanwasoɔ no adi
firi wɔn atamfoɔ nsam.
fa me sie wo ntaban nwunu no ase
9firi amumuyɛfoɔ a wɔretaataa me nsam,
mʼatamfoɔ a wɔatwa me ho ahyia no.
10Wɔpirim wɔn akoma,
11Wɔadi me ntɛtɛ, afei wɔatwa me ho ahyia;
12Wɔte sɛ gyata a ahaboa ho kɔm de no,
te sɛ gyata kɛseɛ bi a wabutu wɔ atɛeɛ.
13Sɔre, Ao Awurade!
fa wʼakofena no gye me firi amumuyɛfoɔ no nsam.
14Ao Awurade fa wo nsa
gye me firi nnipa a wɔte sei nsam
asase so nnipa a wɔn akatua wɔ nkwa yi mu.
Womma ɛkɔm nne wɔn a wʼani ku wɔn ho;
wɔn mmammarima wɔ bebree,
na wɔkora agyapadeɛ ma wɔn mma.
15Na me deɛ, me tenenee mu, mɛhunu wʼanim;
sɛ menyane na mehunu wo a, mʼakoma bɛtɔ ne yam.
ASCB : Nnwom 17